Ku qalin jabinta Marcopper ee Filibiin - Ellicott Dredges Blog
Ku qulqulaya Marcopper ee Filibiin
Source: Macdanta Asia Pacific
Macdanta ceelka furan ee loo yaqaan 'Marcopper' ee macdanta baaruudda furan waxay ku taal meel u dhow xarunta juqraafi ee gobolka Marinduque ee jasiiradaha Filibiin. Jasiiradda oo dhererkeedu yahay 780 kiiloomitir oo isku wareeg ah ayaa 170 kiiloomitir koonfur ka jirta Manila. (Marcopper wuxuu ahaa ilaa dhowaan shirkad hoosaad ka ah Placer Dome.)
Ellicott® taxanaha B890 Wheel-Dragon Dredge
Shirkadda Macdanta Marcopper waxaa loo wakiishay awood millitar oo lagu qiimeeyay oo ah tan loo yaqaan '15000 tonnes' maalintii. Burcadda malaayiinta ayaa lagu daadiyay dooxada San Antonio ee u dhaw xNUMX kiiloomitir meesha ay ka jirto xamuulka. Laba biyo-xireen ayaa loo dhisay iyada oo is dulsaaran labada geesood ee dooxada si ay u dhisaan dariiq ama biyo xireen. Qeybta ugu weyn ee labada biyo-xireen ayaa waxaa lagu dhisay qulqulka qulqulaya biraha dhirbaaxada leh ilaa dhererka crest dhererkiisu yahay mitir 4 oo ka sarreysa heerka badaha. Meelaha qaar, xarkaha biyo-xireenku wuxuu ahaa 330 mitir oo ka sarreeya dabaqa dooxada. Habka dhismaha ee dhulka hoostiisa ah ee lagu dhisayo biyo-xireennada ayaa sababay in xeebo bacaad leh meel u dhow biyo-xireennada iyo isku-shubista meel u dhow xarunta balli-biyoodka.
Ka dib markii maalgashigii ugu horreeyay ee warshadda dib loo soo ceshay, ayaa la bilaabay qorshe lagu dhisayo nidaam qashin-qaabeyn oo lagu wareejiyo xajmiga xajmi weyn ee badda. Dhumucda adag ayaa loo dhisay inay ka soo kabato biyaha dib-u-warshadaynta iyo in la xakameeyo cufnaanta xawaaraha ee u dhexeysa 48% illaa 50% cunnooyinka miisaanka. Kaydadka biyaha cusub ayaa la ballaariyey, oo awoodda kicinta ayaa loo kordhiyay tan tan 25,000 tan maalintii. Nidaamka cusub ee qashin-qubka ayaa ka koobnaa dhuun biyo-tuuryo, ubaxyo la taaban karo, sanaadiiqda lagu tuuro, iyo haamaha keydka. Xariiqa taayirku waxay leeyihiin dherer bilow ah oo ah kiiloomitir 13 kiiloomitir ka weyn kiilooba kiiloo mitir 4 kiiloolloow si gaar ah ayaa loogu talagalay ujeedadaas. Si looga fogaado dejinta isla markaana waqti isku mid ah loo yareeyo biyaha ugu yaraan, jaalaha isku duubka ah waxaa loo dejiyay -1% iyo buundada muruqyada inaysan ka badneyn -1 / 2% si loo yareeyo xirashada. Soo-saareyaasha sibidhka ah ayaa lagu dhisay halka ay sawirradu ka oggol yihiin oo ay suurtogal ku noqotay tuubbooyinka. Qaybaha dhul gariirku ka kooban yihiin waxaa lagu dhisay sanduuqyo dhibic oo aagagga aan cadaadiska lahayn iyo taangiyada birta qaada halkaasoo looga baahan yahay madaxa inuu ku dhaqaaqo qulqulka bada.
Kadib qoditaanka godadka dheemanka 139 ee barkadda iyo aagagga isku xiga, jir macdanta ayaa la muujiyay waxaana la helay inuu ku jiro wadar ahaan kayd juqraafi ahaan xNUMX tan oo celcelis ahaan ah 200% Cu iyadoo la adeegsanayo heerka 0.56% jajabinta naxaasta. Daraasadaha suuragalnimada ayaa damaanad qaaday macdanta qaybta-sare ee heerka sare ee deebaajiga. Tani waxay u baahneyd in sida ugu dhaqsaha badan looga saaro biraha ururay ee balliga iyadoo lagu daadinayo iyo u rarida xajmiga xawaaraha ee rugta lagu qubo ee Calancan Bay.
Ka dib daraasad caalami ah oo lagu sameeyay dhammaan nidaamyada biyo daadinta, nidaam laxiriira deked Talyaani ah oo la adeegsanayo biyo mareenka ayaa loo tixgeliyey. Qaaciddu waxay u baahday wasakhda ugu yar ee biyaha waxayna soo saartay slurry at cufnaanta xakameysan inta u dhaxaysa 40% iyo 60% cunnooyinka adkaha culeyska. Si loo xaqiijiyo ku habboonaanta qulqulka, unug yar ayaa laga tijaabiyey goobta miinada lagu aaso. Dhowr bilood oo tijaabo deg-deg ah kadib, natiijooyinka waxaa laga helay qancin.
Injineero ajnabi iyo Marcopper ah ayaa loogu talagalay oo ay dhiseen laba biyood oo pneumatic ah oo aad u weyn. Kuwaas ayaa la magacaabay muddo yar ka dib. Sidoo kale, xaruntii fiiqinta dabadheer ayaa la ballaadhiyay si loogu habeeyo agabyada kale ee weelasha lagu duugo. Labada webi waxay si habsami leh uga shaqeynayeen dusha sare iyo ciid badan oo qulqulka xeebta leh meel qotodheer oo qodku u dhexeeyo mitirka 15 iyo 20 mitirka hoose ee dusha biyaha.
Qoto dheer iyo qoto dheer iyo walxo badan oo isku dhafan, qulqulka pneumatic wuxuu ahaa mid aan waxtar laheyn maxaa yeelay madaxa hawdka ayaa ku filneyn inuu ku qasbo maaddada galaas. Waxaa la soo gabagabeeyey in qulqulatooyinka firfircoon ee firfircoon ee firfircoon ay la kulmaan dhibaatooyin waaweyn. Daraasado la sameeyay ayaa muujiyey in qulqulka bulukeeti cusub ee la soo saaray uu noqon karo mid waxtar badan marka loo eego wax soo saarka iyo dabacsanaan si wax looga qabto agab fara badan oo biyo gacmeed ah.
Ellicott® Brand B890 Wheel Dragon ™ dredge ayaa la howl galiyay. Dheecaanka baaldilaha ah sidii la filayay ayaa si xamaasad leh u muujiyey wuxuuna cadeeyay inuu aad uga sarreeyo waxqabadka iyo qiimaha marka loo eego barbarihii hore ee sanbabada. Celcelis ahaan, wax soo saarka baaldiga bulukeetiga ayaa lagu qiimeeyay 8000 tan tan maalintii marka loo barbardhigo isku darka qiimeeya 9500 tan maalintii ee labada dhumuc ee sambabada ah. Laba sano kadib Ellicott labaad® astaanta calaamadaha ayaa la saaray hawlgalka.
Ellicott® Brand B890 Wheel-Dragon ™ Kala Bixin
Heerka biyaha si dhakhso ah u soo dhacay ayaa sababtay xirida hal tuubbo-xanuun. Markii qulqulayaadu u soo dhowaadeen dusha dhulgariirkii asalka ahaa, isticmaalka qulqulka pneumatic wuxuu noqday mid aan ku habboonayn dayactirka cufnaanta sare.
Meelmarihii sii xumaaday ee kaashka oo ay sababtay hoos u dhigista qiimaha biraha ayaa ku kacday qiyaastii 5.2 milyan oo mitir cubic ah oo baalal ah oo loo qorsheeyay in laga saaro ka dib marka la joojiyo hawlgallada burburay.
Isbadal lacageed oo ku xiga Marcopper (oo ay ugu wacan tahay qiimaha birta oo hagaagay), iyo filashada dadka reer Tareenka ayaa ka dhigtay mashruuca naxaasta San Antonio inuu u qalmo daraasado suuragal ah oo ballaaran.
Falanqaynta caadiga ah ee birta lagu shubo barkadda ayaa muujinaya qaybinta soo socota:
Qayb aan kala sooc lahayn oo u dhexeeya ciidda iyo slime ayaa loo dejiyay 70% ka gudubka mesh 270. Of 22.5 milyan oo mitir cubic oo tailing inta badan dhoobada kaolinitic iyo chlorite. Muddadii lagu jiray imtixaanka horudhaca ah, madaxa neefsashada ayaa si fudud u dhex galaya noocyada kala duwan ee qalabka taayirrada qoto dheer. Waxay ku qulquleen tuubbada gudaha ee madaxa dredge iyaga oo sameysma godad qaab koone u eg oo ka hooseeya siltanka.
Laba sano ka dib baaritaanada, nabaro-galeenka ayaa daaha ka qaaday in lakabyada khafiifka ah ay noqdeen kuwa is dulfuulan oo jilicsan. Qeybaha ciidda, laakiin, waxay keentay natiijo lagu qanco. Madaxa dillaaca ayaa si fudud sariirta ugu jiifa sariirta isagoo abuuraya koone isku dhaca oo si sahal ugu qulqulaya madaxa qulqulaya. Tani waxay dhalisay soosaar sare iyo heerar la aqbali karo oo ah cufnaanta saxarka.
Kala Bixinta Dhiigga Oof-wareenka
Nidaamka biyo mareenka ee pneumatic wuxuu u isticmaalaa cadaadiska hawo-biyoodka harada dul marta si uu ugu riixo shay ku aasay haanta cadaadiska hawada. Markay taangiga buuxsamayso, hawo isku buuqsan ayaa lagu soo rogayaa dhululubada, waxaa la xidhaa tuubbada korantada waxayna ku qasabtaa slurry-ka in lagu sii daayo dusha sare ee haanta. Hawada ayaa markaa loo sii daayaa jawiga wareegga ayaa dib ugu noqda isku celcelis ahaan ku dhowaad 20-ilbiriqsi labaad. Ficil ahaan, taangiyada 3 waa la isku xidhan yahay si ay u sameeyaan madax duug ah. Hawo isku buuqsan ayaa lagu quudiyaa dhululub kasta iyada oo loo marayo qaybiyaha hawada. Walxaha ka soo baxa haan kasta wuxuu u gudbaa si caadi ah saddexda haamaha. Maaddada ayaa loo daadgureeyay si durdur ah halkii ay ka ahaan lahayd dufanka. Qalabka qulqulaya ayaa lagu rakibay boodhadhka birta leh ee iskuxiran oo cabirkiisu yahay mitir dhererkiisu yahay 12 mitir, dhererkiisu yahay 32 mitir iyo mitir 2.5 qoto dheer. Madaxa dredge wuxuu ka laalaadayaa xero dhererkeedu yahay '15-mitir' oo kor loogu dhajiyay furitaanka dabaqa diiran.
Laba hab oo loo qodayo ayaa loo adeegsaday pneuma-pump kuwaas oo kala ah: "holing" iyo "trailing". Marka la xirayo, furitaanka nuugista waxaa lagu dhejiyay tuubooyin toosan kuwanna waxaa lagu tuuraa maadada culeyska mashiinka. Marka la raacayo furitaanka nuugista waxaa la siiyaa majarafado iyo bamka oo dhan waxaa lagu jiidayaa dhinaca hoose ee balliga. Maaddaama heerka biyuhu hoos u dhacayeen balliga, hawlgallada hareeraha hawo-mareenka waxay noqdeen kuwo ku xaddidan meelaha yaryar. Markay qoditaanku sii qoto dheeraatay, jilicsanaanta la xareeyay waxay noqdeen kuwo is biirsaday oo isku xiran isla markaana ka sii yaraanaya socodka bilaashka ah. Hawlgalka qodista hawo-mareenka ayaa noqday mid sii kordheysa dhib markii ay ku soo dhowaatay dhulkii asalka ahaa. Ugu dambayntii, ka dib markii la qoday qaar ka mid ah 16 milyan oo tan oo dabno ah, qiiqii ugu horreeyay ee sambabaha ayaa la xiray horaantii 1982 sababo la xiriira waxyeelo duufaan halka kan labaadna sidoo kale la xiray dhammaadka isla sannadkaas. Labadii god ayaa markii dambe la kala qaaday oo la iibiyay.
Kala Soo Baxida Bucketwheel
Suurtagalnimada in nabaad-guurka loo adeegsado qalabka kale ee duugoobay marka laga reebo harooyinka neef-mareenka ayaa la baaray. Tani waxay horseeday iibsashada tuubada soo nuugista lakabyada kama dambaysta ah ee slimes iyo ciid ka badan sagxadda hoose ee balliga birta ah.
Dhererka baaldiga buluuga ah ayaa loo doortay jaangooyooyinka caadiga ah ee nuugida-gooyaa maxaa yeelay waxay ku dabaqi kartaa ficil qodis toos ah labada hab oo wareejin ah. Muuqaalkaan dhergeedka baaldiga ah wuxuu u suurta gelinayaa qulqulka inuu si toos ah ugu sii daayo badeecadiisa nidaamka qashinka. Kadib markii la qiimeeyay dhowr oraah oo ka timid soo saareyaal kala duwan, waxaa go'aan la gaarey in lagu iibsado Ellicott® Brand B890 "Wheel-Dragon" Dredge.
Ellicott Brand "Wheel-Dragon" ™ Baqti-jeex Dredges
Ellicott® Brand Bucketwheel dredge waa dhuun biyo mareenno ah oo hawadeedu dhan tahay oo nin lagu xakamayn karo qolka kontoroolka dhexe. Warshad qallalan ayaa lagu hayaa saddax qaybood oo loo yaqaan 'pontoon-nooc' oo alwaax ah oo laga sameeyay bir culus.
Dhirta ugu weyn ee lagu ridayo tuubada biyaha waxaa lagu rakibay barkiyaha qalliinka.
Jaranjarad culus, bir tuubbo bir ah oo kuxiran geeska hore ee qulqulka qolka badhtamaha ayaa xambaarsan baaldi isku rogida loogu talagalay in lagu qodayo alaabada la qali lahaa.
Xawaaraha baaldiga waa la kala duwanaan karaa iyadoo loo eegayo baahida. Dambiilo-baalmeedka waxaa ku shaqeeya matoor biyo-biyood ah oo faras-weyne fara badan iyo torque lagu dhajiyay qaybta hore ee jaranjarada.
Tuubbo nuugid ayaa salka hoosta lagu dhejiyay waxaana lagu keydiyey jaranjarada tuubbada. Xiriir culus oo dabacsan ayaa lagu bixiyaa inta udhaxeysa tuubbada soo jiidashada iyo kalka.
Waxaa jira laba tuubbo bir-tuub ah oo leh dhibco birta ah, mid lagu rakibay tuubad go'an oo lagu haayo, midna lagu rakibay baabuur socdaal u shaqeynaya. Muuqaalka waxaa kor loogu qaadayaa iyadoo la adeegsanayo xargaha hal-durdur ee shaqsiyeedka ah oo leh qodobo ku-dhicid ah oo loogu talagalay soo-gelinta wanaagsan. Habka wadida gawaarida ee loo yaqaan 'Spud carwayway' wuxuu kuu oggolaanayaa safarka hore ee saddexda mitir ah ee qulqulka waxaana lagu meeleeyay kulanka tareenka safarka.
Dhaqdhaqaaqa ra'iisul wasaaruhu waa laba matoor diineed: mid loo wado matoorka xNUMX-inch centrifugal dredge kaas oo u daadiya sheyga tuubbooyinka saboolka ah ee ku xiran aagga dambe ee qulqulka, iyo mid inuu wado matoorrada culus ee matoorka oo keena wareegyo gaar ah matoorka. matoorrada gawaarida xamuulka qaada, wareegga iyo guntimaha korkiisa, oo ay weheliso jaranjarada.
Maaddaama bawdada ay ku soo noqonayso dhammaadka jaranjarada qalloocan, maaddadu waa la xoqaa oo lagu quudiyey nidaam nuugid. Naqshadeynta giraangiraha gooyaa waxay u eg tahay in mar haddii qalabka la jaro, ay kaga baxsan karto oo keliya marinka nuugista iyo soo-gaarsiinta.
Meesha qulqulaya waxay u jajaban tahay dhinac ilaa dhinac dusha iyadoo la adeegsanayo xargaha tooska ah ee shaqsiyaadka tooska ah, xargaha fiilooyinka, iyo xiidmaha. Markabku wuxuu dusha saaraa qaybta culus ee shaqada culus ee culus. Mooshinka horudhaca ah ee goynta waxaa siiya gaari-wade hawo ahaan u shaqeynaya oo saaran dusha sare ee shaqeynaya.
Marka goynta la dhammeeyo ka dib markii gaadhiga uu gaaro safarkiisa ugu sarreeya, xuubka xajista ayaa hoos loo dhigayaa. Gawaarida shaqadu way kacsan yihiin oo gaadhiguna wuxuu u socdaa dhinaca 3-1 / 2 mitir hore. Spud-ka shaqada ayaa markaa hoos loo dhigayaa marka safarka la doonayo la gaadho ka dib kaas oo kor loo soo qaado. Qulqulka ayaa hada diyaar u ah inuu goyn kale sameeyo.
Qulqulatadu waxay ka kooban tahay kuwan soo socda:
Qaybaha Qaabdhismeedka - Qalbigu wuxuu ka samaysan yahay saddex pontoon biraha alxanka muraayadaha, laba dhinac pontoon, iyo hal pontoon dhexe, kuwaas oo si adag ugu xidhan xasiloonida. Qaab dhismeedka 'A-frame' oo leh dib-u-socod adag ayaa lagu bixiyaa dhamaadka wejiga hore ee weheliya jaranjarada jaranjarada ee bixisa kor u qaadista, haysashada iyo hoos u dhigista jaranjarada dhererka.
Qaybaha Dredging - Qaybta baaldiga baaldiga wuxuu ka kooban yahay giraangir baaldi wareegaya oo ay wadaan labo pistons radial, xawaare gaabis ah 106 matoorrada korantada ee korontada ku shaqeeya oo bixiya baaldi goynta wadar ahaan 1,400 rodol oo ah xoog goynta. Suxulka nuugista birta ah ee birta ah wuxuu kuxiran yahay helitaanka helitaanka baaldiga dhinac ka mid ah iyo tuubbada nuugista ee jaranjarada dhinaca kale. Dhuumaha dhuuqida jaranjarada waxay kuxirantahay tuubada nuugista ee pontoon-haadka dhexe iyadoo la adeegsanayo tuubbo caag ah oo la xoojiyay, taasoo u oggolaaneysa u janjeedha jaranjarada qoto dheer ee qoditaanka.
Prime Movers - Ellicott® Nooca "Wheel-Dragon" wuxuu ku qalabaysan yahay laba matoor naaftada ah sida soo socota: Mid 520 HP, CAT Series 3412, si loo wado bamka ugu weyn ee dredge, iyo mid 210 HP, CAT 3306, si loo wado matoorka hawo-qaadashada.
Nidaamka Awoodda Haydarooliga - Nidaamka Haydarooliga waxaa laga sameeyaa saddex wareeg oo madax-bannaan oo furan. Hal wareeg oo baaldiga baaldiga ah; hal wareeg oo loogu talagalay wiishka jaranjarada iyo wiishka lulid; iyo mid loogu talagalay winch-ka loo yaqaan 'spud winches' iyo silsiladda gawaarida gawaarida. Mashiinka ayaa saliida si toos ah uga soo saara saliida haanta saliida ee hooseysa iyada oo loo marayo shaandhada culus.
Nidaamka Korantada - Nidaamka korantada waxaa loogu talagalay inuu bixiyo wareegyada soo socda:
Nidaamka bilaabidda '24 volt' ee mashiinka
Nidaamyada dib u soo celinta baytariga
Bambooyin kala soocaya iyo mishiinnada kaabayaasha iyo kaabayaasha
Solenoid shaqeysiiya alwaaxyada xakamaynta dareeraha
Nidaamka laydhka gudaha iyo bannaanka ee 24 volt
Xakameynta xarunta iyo kontaroolada hawlgalka. Si kor loogu qaado nabadgelyada hawlgalka, dabacsanaanta, iyo hufnaanta kontaroollada waxaa lagu dhejiyaa qalab koronto oo xarunta kontaroolada ah si loogu bixiyo hawlgalka hal-nin ee isku xigxiga kala-baxa.
Qalabka Taageerada & Kaabayaasha
Mid ka mid ah mashiinka 235 HP, 10m dhererkiisu yahay X 3m ballaaran oo ah X 1.3m booraan qoto dheer. Tan waxaa loo isticmaalaa in lagu meeleeyo qulqulka masaafada dheer iyo in lagu jiido dhogorta birta culus.
Mid ka mid ah mashiinka 50 HP, 8m dhererkiisu yahay X 3m ballaaran oo ah 1.3m doonn adeeg qoto dheer. Qaybaha culus ee qulqulaya ayaa lagu soo dejinayaa doontan. Waxaa isticmaala shaqaalaha dayactirka farsamada.
Mashiinka korantada iyo 12 × 10 centrifugal pump ku shaqeeya mishiinka 304 HP. Dhammaantood waxay ku rakiban yihiin markab culus 23m dheer X 12m ballaaran X 1.25m qoto dheer. Tan waxaa loo isticmaalaa in lagu dhajiyo bangiyada dhaadheer ee dusha sare ee dusha sare ee biyaha oo ku dhici kara baaldiga markii la qodayo.
Fiilo 10m dhererkeedu yahay 4.5m ballaaran oo ah X 1.8m qoto dheer oo leh hal xNUMX-tone winch oo loogu talagalay in loo isticmaalo kor u qaadida / jiidida barafka, khadadka dib loo celiyo iyo kuwa kale.
Doon adeegga leh oo leh 9.9 HP outboard motor.
Mashiinka alxarka / dharka goynta ayaa dibadda u saaray deked yar oo sabayn ah.
Haanta shidaalka saboolka ah ee leh awoodda liitar ee 15,000.
La socoshada Dhaawacyada
Dheecaanka meel kasta oo ka mid ah waxaa lagu shubay 16 through laymanka dhexroor ee tuubbooyin iyo tuubbooyin jilicsan oo lagu ridayo sanduuq marin saddex geesood ah ka hor inta aan lagu sii deynin sanduuqa isku dhafka ah ee keena cirifka dabada. Waxay ku taal barta dheecaanka ee sanduuqa hareerihiisa in saxarka laga soo tuuray waran kasta la kormeerayo sida ugu habboon ee loogu safri karo nidaamka xoqidda dabada. Qiyaasta nukliyeerka ayaa cabiray cufnaanta saxarka oo lagu sii deynayo qayb kasta. Sida hubinta dheeriga ah ee cufnaanta, muunadlaha gacanta ku shaqeynaya ayaa jaraya oo soo ururinaya saxarka la fasaxaayo. Shaybaaradaan ayaa markaa laga hubiyaa cufnaanta iyo heerka degitaanka. Haddii cufnaanta ay ka hooseyso 45% adag oo heerka degitaanku uu ka badan yahay 4 fuudh saacaddiiba, dheecaanka daadku waxa lagu celinayaa balliga. Lagu sii daayay boodhka walxaha oo leh heer degitaan ka badan 5 cagood saacaddii ama in ka yar 40% cufnaanta adag ayaa keentay in sibidhka loo maareeyo oo loo badiyo. Inta lagu jiro xaaladahan, qod-qodkii waxaa loo raray meel cusub oo loogu talagalay agabyada si fiican u-qodidda halkaas oo wax soo saarku sii socon doono. Dhaqanku waa in la isku daro ciidda qalafsan ee ka timaada hal meel oo laga jaro mid kale si loo soo saaro iskuxir saxarka ah oo cufnaanta saxda ah iyo heerka dejinta walxaha.
Qorshaynta Kala Duwan
Dhinac-qorsheeyaha ayaa qorsheynaya meesha qulqulka lagu sameeyay seddex-xagleynta iyadoo la adeegsanayo sextant-ka. Goobta qulqulka waxaa lagu qorsheeyay khariidad isla markaana dhaqdhaqaaqyada qulqulaya ee saacadaha 24 ee soo socda ayaa lagu muujiyey khariidadda iyo duurka.
Soo-saarista weellayda baaldiyoodyadu waxay ku saleysan yihiin sahan qiyaaseed oo la sameeyay dhammaadka bisha.
Qorsheynta billaha ah iyo jadwalka muddada fog, celceliska waxqabadka farsamooyinka iyo waxqabadka inta lagu gudajiray bilihii lasoo dhaafay, muuqaalka guud ee balliga oo dhan iyadoo la tixgelinayo dhumucda dabada haray, qaabeynta hoose ee balliga iyo qeybinta jirka ee ciida iyo slimes dhammaantood waa la tixgeliyaa
Ku-meel-gaadhka jadwalka wax-soo-saarka qashin-gooyuhu waa isku-dheelitirnaan bille ah oo biyaha ah taas oo tilmaamaysa heerka biyaha ee balli-biyoodka iyadoo ku saleysan qulqulka qulqulka biyuhu, luminta uumiga iyo bulaacadaha. Biyo-sameynta barkadda balliga waxaa loo bixiyaa sidii loogu baahdo iyadoo ku xiran baahida biyaha. Heerka abaarta la filayo inay ku tiirsan tahay roobka billaha la saadaaliyo ee ku saleysan celceliska roobka muddo toban sano ah.
Khibradda la soo ururiyey wejiga koowaad ee qulqulaya iyadoo la adeegsanayo biyo mareenada pneumatic iyo markii ugu dambeysey ee la adeegsado iyadoo la adeegsanayo biyo mareenka, waxay muujisay in Ellicott® Dredge brand waa mid awood u leh inuu si guul leh u dhammaystiro ka saarida birta dhagxaanta ee lagu shubay deebaajiga San Antonio. Dhawr jeer ayaa qulqulka waxaa loo adeegsaday qodista gadaal iskuxiran oo jaranjarada gudaha balli iyada oo aan wax dhibaato ah ahayn marka laga reebo maaraynta dambe iyo dhagaxa weelka lagu qaso.
Waxaa xigay, labada Ellicot® Noocyada nooca loo yaqaan 'Brand Bucketwheel' waxaa iibsaday qandaraaslaha macdanta oo u isticmaalay iyaga si guul leh uga qodista qaababka cusbada adag ee la isku duubay ee Badda Dhimashada. Doomahaas ayaa wali laga isticmaalaa halkaas maanta.
Waxaa laga daabacay Macdanta Asia Pacific